မေး ခင်ထူးပပးကိုညီနေမင်းရှင့် .. မီး ကိုကို နိုင်ငံခြားမှာ ရှိပါတယ်။ မီးပုံကို ကိုကိုကနေ ခဏလေးနဲ့ ပန်းချီဆွဲပြလိုက်တာ အရမ်းတော် ပါတယ်။ ဆွဲပြီးသားကိုလည်း scan ဖတ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါဒယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေပေါ့. မနာလိုဘူးလေ. အဲ့ဒါ software နဲ့ ဆွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မယုံရင် ကိုညီနေမင်း ဆီ မေးကြည့်ပါလို့ ပြောပါတယ် ကိုနေ။ မီးကိုကို ပို့တာ အစစ်လား အတုလားဟင်။ အတုဆိုရင်တော့ ကြွားထားတာတွေ အရှက်ဗျန်းဗျန်းကွဲမယ် ထင်ပါတယ် ကိုနေရှင့်။ တကယ်ရတယ်ဆိုရင် မီးပုံပို့လိုက်ပါ့မယ်။ တကယ် ပလိုဂရမ်နဲ့ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် တစ်ပုံလောက်လုပ်ပြီး သက်သေပြပေးလို့ ရမလားရှင့်။ မီးဖုန်းစမ်းခေါ်ကြည့်သေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါချည်း ပြောပြီး ဖုန်းချချပစ်တာ ဘာလို့ပါလဲရှင်။ ဖြေး ကိုခင်ထူးလား မပပလား တော့ မသိပါဘူး။ အဲ့လိုမျိုး ဆွဲလို့ ရပါတယ်။ scan ဖတ်ပြီး မေးလ်ကနေ ပို့လိုက်တာကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ အကြံမပေးတတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ :P .. သားဖွားခန်းတို့၊ ခွဲစိတ်ခန်းတို့ ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ခွဲခန်းတို့တော့ ပို့လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းသာ အမြန်ပို့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ မပို့လိုက်ပါနဲ့။ အဟီးဟီး။ တပေါ်ကျဲ့ တပည့်ကျော်တွေတော့ သင်တန်းမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးနည်းလက်တွေ့သက်ပေးထားတာ ပူပူနွေးနွေးတွေ ရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကို လက်တွေ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် software တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ညစ်ပြီး အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ လည်ပင်းချီပြီး သေကြောင်း မကြံပါနဲ့လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ မခင်ထူးခင်ဗျာ... မယုံရင် ကွန်ပျူတာထဲ အင်စတော်လေးရှင်း လုပ်ပီး ပလယ်ဒီကယ် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဟုတ်မဟုတ် အန်စာတုံးတွေ့ပါလ်ိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ထက် ပိုတိကျတဲ့ သတ်သေ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ မူရင်း ၀က်စိုက်နဲ့ သတ်သေတွေပါ :P ဖုန်းချလိုက်တာကတော့ တားတား ကြောက်လို့ပါ။ သတ်တော့ မသေပါရစေနဲ့ဦး အမေဆူလိမ့်မယ်။ အဟီးဟီး။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ မလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သင်တန်းချိန်ဖြစ်နေလို့လည်း ပါပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူများလည်း ပလယ်ဒီကယ် စမ်းလို့ရပါတယ်။ လိုချင်သူများ အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ :)
မေး တောသားလေးးအစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ကို တစိတ်လောက် ကူညီပေးပါဦး။ တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး laptop driver ပါ ကျွန်တော့် laptop က Acer aspire 4740 G ပါ။ window7အတွက် ရရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ driver မရှိလို့ ရွာလည်နေပါတယ်။ ဖြေးညီလေးရေ ရွာလည်ရင်တော့ ဗိုက်ဝတာပေါ့။ တအိမ်တက်ဆင်း ထမင်းဖိတ်ကျွေးတော့ ထမင်းဖိုး မကုန်တော့ဘူးပေါ့။ တစ်ချို့တွေက တောသားလို့ပြောရင် နာကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မနာပါဘူး။ ညီနေမင်းက တောသားလား မြို့သားလား ဆိုရင်တော့ တောလည်းမဟုတ် မြို့လည်းမဟုတ် ကလို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ကျွန်တော့် ချက်မြှုပ်ဇာတိကို သိတဲ့သူ ၀ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ ဟိုတစ်လောကမှ သိလိုက်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူပဲသိပါတယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကို့မွေးတဲ့နေရပ်၊ ချက်မြှုပ်ထားရာ ဒေသကို လွမ်းတတ်တ၊ တမ်းတတတ်ကြပါတယ်။ မိခင်နိုင်ငံကြီးရဲ့ အဝေးမှာ သွားအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မိဝေးဖဝေး ညီလေး/ညီမလေးများကိုလည်း မိခင်နိုင်ငံကြီးမှာ အမြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အရင်က လူကြီးဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော် အခု ကလေးပြန်ဖြစ်နေရတယ်ဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေဘေးနားရှိတော့ အားတက်တာပေါ့။ ဟုတ်ဖူးလား။ Chipset Intel Chipset Driver 9.2.0.1021 2.5 MB DOWNLOAD 3G Huawei 3G Module Driver 2.0.6.706 4.3 MB DOWNLOAD AHCI Intel SATA AHCI Driver 10.1.2.1004 9.7 MB DOWNLOAD AMT Intel Intel iAMT Driver 7.0.0.1144 4.0 MB DOWNLOAD Audio Conexant Audio Driver 8.54.6.0 51.2 MB DOWNLOAD Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0) 7.4.0.96 177.5 MB DOWNLOAD Bluetooth Atheros Bluetooth Driver 7.2.0.60 105.8 MB DOWNLOAD Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.3.0.7300 59.2 M DOWNLOAD CardReader Realtek Card Reader Driver 6.1.7601.85 10.8 MB DOWNLOAD Lan Atheros LAN Driver 1.0.0.36 4.7 MB DOWNLOAD TouchPad ELANTECH Touchpad Driver 8.0.6.0 61.0 MB DOWNLOAD TouchPad Synaptics Touchpad Driver 15.2.9.0 82.4 MB DOWNLOAD USB Renesas USB Driver (3.0) 2.0.26.0 6.8 MB DOWNLOAD VGA Intel VGA Driver 8.15.10.2345 121.4 MB DOWNLOAD VGA NVIDIA VGA Driver (Phyx) 9.10.0514 24.6 MB DOWNLOAD VGA NVIDIA VGA Driver 8.17.12.6721 262.0 MB DOWNLOAD Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 9.0.0.202 9.2 MB DOWNLOAD Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 5.100.235.19 31.7 MB DOWNLOAD Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 14.0.1.2 92.5 MB DOWNLOAD Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver 1005.12.0105.2011 19.7 MB DOWNLOAD BIOS Acer BIOS 1.10 5.6 MB DOWNLOAD BIOS Acer BIOS 1.08 5.6 MB DOWNLOAD BIOS Acer BIOS 1.07 5.6 MB DOWNLOAD BIOS Acer BIOS 1.04 5.6 MB DOWNLOAD BIOS Acer 1. Updates all logo resolution to 1024 * 768. (more…) 1.05 5.7 MB DOWNLOAD BIOS Acer 1. Updates nVidia N12PGS VBIOS to 70.08.45.00.3E for P5LJ0/P5LS0. (more…) 1.03 5.6 MB DOWNLOAD BIOS Acer Adds 1.5 sec delay in ZPODD _DSM for Super Multi HLDS(GU40N), The ODD need 1.5 sec to wake up after power supply. 1.02 5.6 MB DOWNLOAD
2012 အတွက် အကောင်းဆုံး recovery software ဆုရ Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro.5.0
2012 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် လူကြိုက်အများဆုံး Data backup recovery software ဆု ရရှိသည့် Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro 5.0 ကို ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Serial number နှင့် Software များကို ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ်။ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့ကောင်းတာလဲ ဓါတ်ပုံတွေ Data တွေကို ဘယ်လောက် % အထိ ယူနိုင်သလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ ဖျက်ထားတာကို မစမ်းချင်ဘူးဆိုရင် format ရိုက်ပြီး ပြန်ယူကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့သိဖို့ Hard disk ကိုတော့ format ရိုက်ပြီး မစမ်းပါနဲ့ Data များရင် နည်းနည်း ဖိုင်များလို့ ကြာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် flash drive (or) memory stick ကြိုက်သလိုခေါ်ပါ။ အလွယ်နည်းနဲ့ flash drive လို့ပဲခေါ်ရအောင်ပါ။ flash drive တွေနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ (ဒါနဲ့စကားမစပ် လက်တို့ပြီးတော့ သတိပေးပါဦးမယ်. laptop ပဲ ရောင်းရောင်း၊ Desktop ပဲရောင်းရောင်း အဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရေးကြီးတာတွေ ထည့်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးက အဲ့အထဲက Hard disk ကို မရောင်းပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အသစ်သာ တစ်လုံး ၀ယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါ ကိုယ့်အတွက် အန္တရယ်ကင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ။ ) ပါ့စ်ဝါ့ဒ်ကတော့ ကျွန်တော့် အီးမေးလ်လိပ်စာပါ .. Download Software
flash ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဖိုင်များအား ကြည့်ရန် Flash Player Pro v5.3
မေး ချစ်လူမိုက်းတော်တော်များများဟာ ဘုရားပုံတွေနဲ့ တော်တော်များများသော flash ဖြင့် လုပ်ထားတဲ့ swf format များနှင့် flash file များကို ကြည့်ဖို့အတွက် web browser များဖြင့် ကြည့်နေရပါတယ်။ အဲ့ဒါ သူ့ကိုကြည့်တဲ့ software ရှိရင် ပေးပါအစ်ကို။ အကြီးကြီးလည်း မလုပ်ပါနဲ့ ညီလေးက မြန်မာပြည်ကဆိုတော့ connection က နှေးတော့ ဖိုင်ဆိုက်သေးပြီး သုံးလို့ အဆင်ပြေတာလေး တင်ပေးပါအစ်ကို.
ဖြေးညီလေးရေ ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ညီ့နာမည်ကို မြင်ပြီးတော့ ကြောက်လို့ ညီ့မေးလ်လိပ်စာမထည့်ပေးတော့ပါဘူး အဆင်ပြေပါစေညီလေး :P
ကဲအောက်မှာ လိုချင်တဲ့သူများ Download လုပ်ယူကြပါ။
TeamViewer Corporate v7.0.12541.0 (Full version)နော်
ညတုန်းကတည်းက တင်ပေးမလို့ပါပဲ.. ဒါပေမယ့် အင်တာနက် speed က download speed က မြန်ပြီး upload speed က အရမ်းနှေးနေလို့ တိုင်ပတ်သွားတယ်။ ခုလည်း ဒေါင်းတာကတော့ ရတယ်။ ပြန်တင်ဖို့ ခက်နေလို့ ဖိုင်ဆိုက်သေးသေးနဲ့ အသုံးဝင်တာတွေ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတာတွေလည်း တင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ serial number အတွက်ကလည်း စီစဉ်ပေးနေရတော့ မအားဘူးဖြစ်သွားတယ်။ software တော်တော်များများကို serial number တွေနဲ့ချည်းပဲ A ကနေ Z အထိ A ဆိုရင် A နဲ့စတဲ့ software တွေပေါ့ ဥပမာ A ကိုနှိပ်တာနဲ့ adobe photoshop တို့ Adobe Dreamweaver တို့၊ စသဖြင့်ပေါ့လေ သူ့ version အလိုက် တစ်ခါတည်း ပါလာမှာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ password က ကျွန်တော့် အီးမေလ်းလိပ်စာပါ။ လိုင်စင် version ကတော့ မလုပ်တတ်သူများ ၀ဘ်ဆိုက်ညာဖက်အခြမ်းမှာ လိုင်စင် ဗားရှင်းဖြစ်အောင် လုပ်နည်းကို video နဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Surftheworld 2012 wifi hacking tool (ပြေမပြေကတော့ မသိဘူးနော် :P) (wifi hacking tool ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်)
တောင်းထားတဲ့ အရင်ကလူတွေ ရှိလို့ ဟိုးအရင်က တင်ပေးထားတဲ့ လင့်က သေသွားပါပြီ။ အခုဟာက ပိုစုံလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာ လူငယ်များ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုက security တွေက အရမ်းမြင့်မြင့်နေကြကုန်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် WEP security လို hacking tools မျိုးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကိုယ့် rounter security ကို WEP ပြန်နှိမ့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေ။ ခုကတော့ ဘယ်အထိ ရသလဲ မစမ်းရသေးပါ။ အရင်က တင်ထားတဲ့ လင့်တွေ သေကုန်တာကြောင့် အသစ်တွေ ပြန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mediafire | Filecloud | Minus
ipot, iphone, ipad စတာတွေထဲကို သီချင်း၊ video၊ Games၊ softwares တွေ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။
မေး ညီသွေး အစ်ကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့် iphone ထဲကို အစ်ကိုတင်ပေးတဲ့ game နဲ့ software တွေကို ထည့်ကြည့်ပါတယ်. itunes ကနေ ထည့်တာ လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။ ဘယ်လိုထည့်သင့်သလဲ ဆိုတာလေး လမ်းညွှန်ပေးပါဦး။ အဆင်အပြေဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး software လေးရှိရင် ကူညီပေးပါဦး။ အားကိုးလျှက်ပါဗျာ။ နေကောင်းပါစေ။
ဖြေးကိုညီသွေးရေ အခုအချိန်အထိတော့ ညီပြောတဲ့ software တွေ၊ Games တွေကို အဆင်အပြေဆုံး install လုပ်နိုင်တာကတော့ ifunbox ဟာ အဆင်အပြေဆုံးပါဘဲ။ လွယ်လဲလွယ်ကူသလို အဆင်လဲပြေပါတယ်။ install ပါ တစ်ခါတည်း လုပ်ပေးပါတယ်။ ကဲသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါကိုပဲ သုံးနေပါတယ်။ အော်ဒါနဲ့အားလုံးကို ပြောဖို့ကျန်သွားပါတယ်။ အခုကျွန်တော်။ A to Z အထိ ရှိတဲ့ software နဲ့ games တွေရဲ့ serial number (or) product keys များကို A, B, C, D စသည်ဖြင့် တန်းစီပြီးတော့ တင်သွားပေးမှာပါ။ မိမိလိုချင်တဲ့ software နာမည်ကို အဲ့ထဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ လိုချင်တဲ့ software အမျိုးအစားပေါင်း များစွာကို လက်လှမ်းမီသလောက် အကုန်တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ crack (or) Patch နဲ့ အဆင် မပြေသူများအတွက် တမင်တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ အခုတော့ iphone, ipot စတာတွေကို ကြိုက်တဲ့ Games နဲ့ application တွေ ထည့်ဖို့အတွက် အဆင်အပြေဆုံး software ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကနေ ခဲခြစ်ပန်းချီ ပြုလုပ်နိုင်သော Pencil S...
2012 အတွက် အကောင်းဆုံး recovery software ဆုရ Stel...
flash ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဖိုင်များအား ကြည့်ရန် F...
TeamViewer Corporate v7.0.12541.0 (Full version)နေ...
Surftheworld 2012 wifi hacking tool (ပြေမပြေကတော့ ...
ipot, iphone, ipad စတာတွေထဲကို သီချင်း၊ video၊ Gam...